Xagee Laga Iibsadaa Ripple (XRP) USA | 2021 - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn Xagee Laga Iibsadaa Ripple (XRP) USA | 2021
Xagee Laga Iibsadaa Ripple (XRP) USA | 2021
Isha Sawirka: thestreet.com
Awoodda Ripple ee dib -u -habaynta nidaamka maaliyadeed mustaqbalka lama soo koobi karo. Horeba, XRP waxay khatar ku tahay awoodda SWIFT ee xawilaadaha lacagaha ee xuduudda.
In kasta oo ay ka heleen aalado kale oo loo yaqaan 'cryptocurrencies' oo ku yaal madal tikniyoolajiyadda xannibaadda, Ripple waxay shaqaaleysiisaa hoggaamiye la isku raacsan yahay oo la qaybiyay oo leh shabakado ansaxiya adeegayaal iyo qadaadiic crypto loo yaqaan XRP (mararka qaarkood loo yaqaan Ripples).
Ripple waa lacag dijital ah oo ku saleysan XRP Ledger. Nidaam baahsan ayaa xukuma buugga, iyada oo in ka badan 150 ansaxiyayaal ay ku yaalliin adduunka oo dhan.
Macaamilku waa mid deg deg ah oo aan qaali ahayn maxaa yeelay ma jiro hal maamul oo mas'uul ah. RippleNet iyo RippleX, badeecadaha calanka ee madal, waxaa taageera XRP Ledger.
Akhriso: Sida Loo Iibsado Kaydka Ripple 2021 | Hagaha Tallaabo-Tallaabo ah
Waa maxay Dhibaato?
Ripple waa shirkad laga aasaasay Maraykanka. Hadafka Ripple waa inuu ka dhigaa dirista lacag-bixinta xuduudaha xudduudaha ganacsiga maaliyadeed, gaar ahaan qaybta bangiyada, mid ka sii hufan.
Waxay damacsan tahay inay tan ku gaarto iyadoo meesha ka saareysa dhex -dhexaadiyaha, kaasoo yareyn doona kharashyada iyo waqtiyada macaamilka.
Adeegga lacag -bixinta xRapid ee shabakadda Ripple wuxuu shaqaaleysiiyaa cryptocurrency XRP, oo ku saleysan buug -yaraha XRP. Shabakadda Ripple, XRP waxaa loo adeegsadaa fududeynta macaamil ganacsi.
In kasta oo Ripple iyo XRP si isdaba joog ah loo adeegsado, Ripple waa goob lacag bixin, halka XRP ay tahay hanti dijitaal ah oo ka madax bannaan Ripple.
Waxay kaliya u adeegtaa sidii isku xirka lacagaha kala duwan ee fiat -ka ee lagu gudbiyo shabakadda Ripple. Waxay sidoo kale u adeegtaa ilaha dareeraha shabakadda.
Akhri Sidoo kale: Goorma ayay tahay waqtiga ku habboon in la Iibsado & Iibinta Saami 2021?
RippleNet waxay bixisaa saddex badeeco oo xusid mudan:
xRapid - wuxuu bixiyaa dammaanad marka la dalbado wuxuuna hubiyaa in XRP -yada lagu hayo xisaabaadka qarsoon ay gacan ka geysan karaan macaamilka sida isweydaarsiga iyo wareejinta.
Ururada maaliyadeed way isticmaali karaan x Hadda si ay u bixiyaan lacag-bixin aan xad lahayn oo xuduuda ah. Waxa kale oo ay siisaa kanaal isgaarsiineed isla ururrada si ay u gudbiyaan farriimaha una xaqiijiyaan macaamil ganacsi bilow ilaa dhammaad.
xVia - is -dhexgal lacag -bixin oo aasaasi ah oo u oggolaanaya hay'adaha inay gudbiyaan lacag -bixinta, soo saaraan qaansheegta, oo ay la socdaan gaarsiinta adduunka oo dhan.
Hubi Sidoo Kale: 5 Qodobka ugu fiicane Aaladaha Ganacsiga Istaraatiijiyada 2021 -ka
Miyaan Sameeyaa Maalgelin Hadda?
Bangiyadu runtii waxay sii wadi doonaan inay adeegsadaan SWIFT halkii ay ka isticmaali lahaayeen RippleNet.
Bilowga, Komishanka Amniga iyo Sarrifka ee Mareykanka ayaa gudbiyay cabasho ka dhan ah Ripple, iyagoo ku eedeeyay in shirkaddu XRP ku beddeshay dammaanad aan diiwaangashanayn bishii Diseembar 2020.
Natiijo ahaan, haysashada XRP hanti ahaan waa xoogaa halis ah.
Dhinaca kale, haddii garsoore xukumo wanaagga Ripple, waxaa laga yaabaa inay abaalmariyaan kuwa haysta XRP bukaanka. In kasta oo is -weydaarsiyada qaarkood ay wax ka weydiiyeen dib -u -qorista XRP, mustaqbalka qadaadiicda ayaa weli ah mid aan la hubin ilaa khilaafka la xalliyo.
Adiga ayay kugu xiran tahay inaad go'aansato haddii khatarta/abaalmarinta iibsashada ama haysashada XRP ay tahay mid qiimo leh. Macaamiil badan oo maaliyadeed ayaa doorbidaya in aysan la falgalin urur suuragal ah oo sharci-darro ah ilaa xaaladda laga xalliyo.
Intaas waxaa sii dheer, hay'adaha maaliyadeed waxay sii wadi doonaan in loo jiido adeegyada sida SWIFT iyo Bangiga Degsiimada Caalamiga ah sharaftooda awgeed.
Marka, sida inta kale ee kaydka cryptocurrency, XRP waa qadaadiic OK si aad u iibsato inta lagu jiro hoos u dhaca.
Miyuu Ripple yahay Cryptocurrency lagu kalsoonaan karo si loo maalgaliyo?
XRP waxay u soo celisay maalgeliyeyaasha ixtiraam leh 12,758.41% horraantii 2012, iyadoo $ 10,000 maalgelin ku beddeshay $ 1,265,841 sagaal sano gudahood. Taasi waa wax cajiib ah, laakiin kaliya marka la eego macnaha guud ee boqortooyada crypto.
Tusaale ahaan, laga soo bilaabo horraantii 2015, Ethereum wuxuu soo noqday 85,719 boqolkiiba, oo weli aad u hooseeya marka la barbar dhigo dakhliga sanadlaha ah ee qaar ka mid ah cryptocurrencies kale.
Sideen Ku Helaa Ripple gudaha Mareykanka?
Si aad u barato sida XRP looga iibsado Mareykanka, raac tallaabooyinka hoose.
Tallaabada 1: Abuur Koonto Isticmaal: Helitaanka dillaaliin onlayn ah waa tallaabada ugu horreysa ee iibsashada Ripple ee bilowga ah. Waxaad Ripple ka iibsan kartaa dillaaliin kala duwan, laakiin eToro waa dillaalka internetka ugu sarreeya ee lagu iibsado Ripple gudaha Mareykanka sanadka 2021.
Tallaabada 2: Xaqiiji Aqoonsigaaga- Xaqiijinta Koontada: Kahor intaadan iibsan wax shilimaad ah, dilaaliinta crypto waxay u baahan yihiin macaamiil cusub si ay u xaqiijiyaan xisaabaadkooda ganacsi. Xaqiijinta waxay u baahan tahay in la keeno nuqul ka mid ah aqoonsigaaga iyo caddeynta dukumentiyada cinwaanka oo u dhigma macluumaadka ku qoran foomka is -qoritaankaaga.
Tallaabada 3: Miisaaniyada Debaajiga: Isla marka xaqiijintaada la dhammaystiro, waxaad lacag ku shubi kartaa boorsadaada eToro. Si aad uga bilawdo ganacsiga internetka eToro ee Mareykanka, waa inaad sameysaa deebaaji $ 200. Dhammaan lacagaha, eToro waxay ku dallacdaa boqolkiiba 0.5 ujrada beddelidda.
Tallaabada 4: Iibso XRP: Hadda oo aad lacag ku leedahay koontadaada eToro ee firfircoon, waxaad iibsan kartaa XRP. Waxaad ku maalgashan kartaa qiimaha hoose ee XRP ama ku ganacsan kartaa sidii CFD. Easy-peasy. Si aad u bilowdo, tag websaydhka eToro oo ka iibso XRP gudaha Mareykanka maanta.
MEESHA UGU FIICAN EE LA Iibsado RIPPLE 2021 -ka
Iibsashada XRP waxay ahayd mid fudud ilaa ay ka timid kormeerka sharciyeynta bishii Diseembar 2020, markii loo diyaariyay iibsiga ficil kasta oo is -weydaarsi ah. Kuwa soo socda ayaa weli ah goobo laga yaabo inaad ka iibsato XRP:
eToro waa dillaal ay maamusho Mareykanka oo leh liisamo caalami ah oo dheeri ah. Badbaadada maaliyaddaada, waa inaad doorataa dillaal u hoggaansan. eToro waa madal maalgashi oo caalami ah oo u adeegta in ka badan 18 milyan oo maalgashadayaal in ka badan 140 dal.
Ururka Mustaqbalka Qaranka (NFA) iyo Guddiga Ganacsiga Badeecadaha Mustaqbalka ee Mareykanka (CFTC) ayaa maamula Xafiiska ugu weyn iyo xarunta dhexe ee shirkadda waxay ku taal Tel Aviv, Israel. Waxaa maamula Ururka Mustaqbalka Qaranka (NFA) iyo Guddiga Ganacsiga Badeecadaha Mustaqbalka ee Mareykanka (CFTC).
Markaad iibsaneyso XRP markii ugu horreysay, waxaa ugu wanaagsan inaad raacdo dillaal nidaamsan. Xeerka adag wuxuu kor u qaadaa kalsoonida dilaalka iyo maalgashadayaasha '.
Taasi waa sababta eToro uu yahay dillaalka ugu caansan maalgashiga XRP ee Mareykanka sanadka 2021.
Kani waa dillaaliye saaxiibtinimo u leh barashada sida looga iibsado Ripple gudaha Mareykanka. Isticmaalka, dillaalkani wuxuu bixiyaa madal ganacsi oo hal -abuur leh oo leh astaamo u gaar ah oo u fududaynaya ganacsatada bilowga ah inay bilaabaan socdaalkooda maaliyadeed.
Waxay ku faantaa madal ganacsi nuqul ugu fiican suuqa, tusaale ahaan. Haddii aadan weli ku qancin, tixgeli tan: waxaad si ficil ah ugu dayan kartaa dhaqdhaqaaqyada ganacsatada guuleysta ka hor intaadan baran sida si habboon loo ganacsado.
Uma baahnid inaad ku bixiso lacag yar si aad tan u hesho. Si lagaaga caawiyo inaad horumariso meheraddaada ganacsi, eToro hadda waxay ku siisaa iibsashada XRP eber komishanka gudaha Mareykanka. Bilaabidda eToro waxay qaadataa wax ka yar shan daqiiqo.
Coinbase waa isweydaarsiga cryptocurrency iyo dillaal laga aasaasay Mareykanka oo bixiya in ka badan 2500 hanti dijitaal ah. Sababtoo ah sumcaddeeda soo jireenka ah, waa mid ka mid ah is-weydaarsiga ugu aaminka badan.
Qof kasta oo waqti ku filan ku qaatay boqortooyada crypto wuxuu maqlay Coinbase, oo ah hormuudka sarrifka crypto ee Mareykanka. Waxay bixisay in ka badan boqollaal cryptos, oo ay ku jiraan XRP, tan iyo markii laga bilaabay Mareykanka 2012. (XRP).
Markaad baraneyso sida XRP looga iibsado Mareykanka, bilowgayaashu waxay qaddarin doonaan naqshadda saaxiibtinimada leh ee Coinbase. Way fududahay in la isticmaalo, umana baahnid wax khibrad hore ah oo ku saabsan cryptocurrencies si aad ugu iibsato Ripple Coinbase gudaha Mareykanka hadda.
Waad iska qori kartaa oo ku heli kartaa cryptocurrency dhowr daqiiqo gudahood. Coinbase uma oggolaato inaad ku iibsato XRP boorsadaada elektarooniga ah, sida PayPal. PayPal waa dariiqa kaliya ee maalgashadayaashu ay lacagtooda uga soo saaraan.
Taa bedelkeeda, waxaad isticmaali kartaa wareejinta bangiga Mareykanka ama kaarka deynta iyo kaararka deynta si aad u maalgaliso boorsadaada ganacsiga.
Waa inaad ogaataa in lacag -bixin kasta oo aad ku bixiso kaarka deynta ama kaarka deynta ay ka imaan doonto Coinbase lacag dhan 3.99 %.
Markaad iibsato ama iibiso XRP, guddi kale oo ah 1.49 % ayaa lagu dari doonaa koontadaada. Si aad uga faa'iidaysato kharashyada jaban, waxaa laga yaabaa in lagaa rabo inaad u beddesho Coinbase pro.
Markaad iibsaneyso XRP bilowga Mareykanka, kuwani waa caqabadaha aasaasiga ah ee aad u badan tahay inaad la kulanto dillaalkan.
CEX.io waa mid ka mid ah is -weydaarsiyada aadka loo isticmaalo iibsiga iyo iibinta Ripple iyo cryptocurrencies kale.
Websaydhku wuxuu bixiyaa adeeg dilaalnimo qadaadiic ah iyo sidoo kale goob ganacsi oo lagu ganacsado BTC, BCH, ETH, iyo XRP.
Haddii aad tahay qof bilow ah, waxaa ugu wanaagsan inaad raacdo ikhtiyaarka dilaalnimada halkii aad ka heli lahayd madal -ganacsiyeedka goobta.
Waxaad ka iibsan kartaa cryptocurrencies CEX.io kaarka deynta, wareejinta siligga, wareejinta SEPA (haddii aad ku nooshahay EU), ama wareejinta ACH (deganeyaasha Mareykanka). Websaydhku wuxuu bixiyaa laba siyaabood oo lagu iibsado cryptocurrency: goob ganacsi iyo adeeg dilaalnimo.
CEX.io waxay ka jari kartaa ilaa 7% xaddiga lacagta fiat ee aad ku bixisid adeeg ahaan lacag ahaan. Tusaale ahaan, haddii aad $ 1000 ku iibsato Ripple, waxaad heli doontaa kaliya $ 920.
Tani waxay muujineysaa in sicirka sarrifka sare ee aad ku aragto CEX.io uu horeyba ugu jiray qiimaha adeegga, mana jiri doonto ajuuro dambe. Iyada oo ku xidhan lacagtaada iyo habka lacag -bixinta, kharashyada ka -bixitaanka illaa 3% oo lagu daray khidmadaha adeegga illaa $ 25 ayaa laga yaabaa inay khuseeyaan (kaararka deynta ayaa ah ikhtiyaarka ugu qaalisan).
KuCoin wuxuu isu aasaasay inuu yahay dukaan caan ah oo hal-joog u ah dhammaan noocyada hawlgallada crypto, taasoo ka dhigaysa magac caan ku ah qaybta crypto.
Tan iyo markii la bilaabay Ogosto 2017, is -weydaarsiga ayaa koray si loogu daro in ka badan 200 cryptocurrencies iyo in ka badan 400 oo suuqyo, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah xarumaha ugu firfircoon ee khadka tooska ah ee internetka.
Maalgashadayaasha cryptocurrency, KuCoin waa isweydaarsiga cryptocurrency ee ugu fiican. Waxay leedahay qaddar sare, tiro badan oo adeegsadayaal ah, hanti iyo adeegyo kala duwan oo la taageeray, iyo kharashyada ganacsi ee ugu yar.
Intaa waxaa sii dheer, uma baahna dhammaan macaamiisheeda inay maraan baaritaannada KYC, taas oo ah astaamo waxtar u leh kuwa ay khuseyso asturnaantooda.
Adeegga dilaalnimada ee Coinmama, oo ahaa kii ugu horreeyey ee isku xira Apple Pay, ayaa kuu oggolaanaya inaad kaarkaaga amaahda, SWIFT ama wareejinta SEPA ku iibsato XRP iyo cryptocurrencies kale.
Ururku wuxuu xoogga saarayaa waayo -aragnimada macmiilka iyo daryeelka macmiilka si loo sameeyo macaamil sida ugu dhaqsaha badan (xaqiijinta isticmaalahu waxay qaadataa qiyaastii 30 daqiiqo).
Tani waa meel fiican oo laga bilaabo haddii aad ku cusub tahay Ripple. Isticmaalayaasha horumarsan waxay lacag ku kaydsan karaan kharashaadka macaamil ganacsi iyagoo adeegsanaya aagag ganacsi oo kale.
Coinmama waa dillaal cryptocurrency oo bixiya XRP iyo cryptocurrencies kale adeeg ahaan. Tani waxay ka dhigan tahay halkii aad ka iibsan lahayd shilimaad shaqsiyaadka kale meherad ganacsi, shirkadu si toos ah ayay kaaga iibinaysaa.
Ka sokow Apple Pay, shirkaddu waxay hadda aqbashaa lacag -bixinnada bangiga wareejinta (SEPA iyo SWIFT) oo aan lahayn wax khidmad ah (SWIFT, SEPA, Fedwire, FasterPayments, iyo Sofort).
Lacagaha la isticmaalo waa EUR, USD, GBP, AUD, CAD, iyo JPY. Sababtoo ah 5 % khidmadda kaarka deynta ayaa la dallacaa, qiimaynta Coinmama waxay 10.9 % ka badan doontaa heerka suuqa.
6. Huobi Global:
Huobi Global waa isweydaarsiga cryptocurrency oo malaayiin isticmaaleyaal ah in ka badan 130 waddan. Waxay taageeraan in ka badan 190 lammaane oo loo yaqaan 'cryptocurrency lammaane' waxayna siiyaan marin u helidda in ka badan 400 oo suuq.
Huobi wuxuu mudnaanta siinayaa ilaalinta macmiilka iyo nabadgelyadiisa, iyo sidoo kale madal la isku halleyn karo oo ammaan ah, wuxuuna hirgaliyay hab -maamuusyo ammaan oo khaas ah.
Kaydinta qabow ee khadka tooska ah ayaa la adeegsadaa, iyo sidoo kale hababka hubinta lakabyo badan iyo isuduwidda Goldman Sachs iyo khubarada warshadaha.
Huobi waxay ku dallacdaa boqolkiiba 0.2 khidmadaha ganacsiga, halka kharashyada ka bixitaanka iyo kuwa ugu yar ay kala duwan yihiin iyadoo ku xiran nooca lacagta iyo nooca koontada (aan la xaqiijin, la xaqiijiyey). Huobi waxay aqbashaa lacagaha fiatka waxayna leedahay sharciyo gaar ah oo la xiriira ka bixitaanka iyo dhigashada doolarka Mareykanka.
Intaa waxaa sii dheer, waxay siisaa xubin VIP ah jadwalka qiimeynta VIP. Khidmadaha yar ayaa noqda marka heerka xubinnimada VIP uu kor u kaco.
Si ka duwan kuwa kale, heerka waxaa lagu go'aamiyaa xaddiga Huobi Tokens ee la iibsaday kahor intaan la ganacsan. Huobi wuxuu oggol yahay ikhtiyaarro kala duwan oo lacag -bixin ah, oo ay ku jiraan koontada bangiga, Paypal, SWIFT, iyo PayNOW, iyo kuwo kale.
Bithumb waa isweydaarsiga cryptocurrency oo ay maamusho dhinac saddexaad oo kuu oggolaanaya inaad iibsato, iibiso, oo aad ka ganacsato noocyo kala duwan oo cryptocurrencies ah. Way koray si ay u noqoto mid ka mid ah is -weydaarsiga ugu weyn adduunka marka la eego mugga ganacsiga maalinlaha ah.
Maalin kasta, Bithumb wuxuu ka ganacsadaa in ka badan $ 100 milyan, laakiin wuxuu gaadhay ilaa $ 2 bilyan, taas oo ah xaddiga lacagta ee dadku ku ganacsadaan muddo 24-saac ah.
Nooca qadaadiicda aad dooratid inaad u isticmaashid si aad u maalgeliso koontadaada ayaa go'aamisa kharashyada deebaajiga. Bithumb wuxuu ku dallacayaa khidmad ganacsi oo aasaasi ah oo ah 0.15 boqolkiiba dhammaan lacagta aad iibsaneyso ama iibineyso.
Haddii aad iibsato $ 1000 oo ah Ripple, tusaale ahaan, waxaad bixin doontaa 0.15 % lacagtaas, ama $ 1.50.
Bitstamp waxay u noqon kartaa beddel hufan shaqsiyaadka ku cusub crypto ee doonaya inay ku dhegaan lacagaha waaweyn ama xitaa altcoins -ka caanka ah, iyada oo ay ugu mahadcelinayaan qaab -dhismeedkiisa ujrada fudud iyo awoodda ay u iibsan karto crypto iyadoo la adeegsanayo lacagta fiat si toos ah xisaabta bangiga, kaarka deynta, ama kaarka bangiga.
Asal ahaan, bitstamp wuxuu sheeganayaa inuu ku kaydiyo 98 boqolkiiba hantida dijitaalka ah kaydinta qabow iyo inuu hubiyo dhammaan hantida.
Si ka duwan is -weydaarsiyada kale ee cryptocurrency, Bitstamp waxay ku dallacdaa boqolkiiba hal khidmad guri ah iyadoon loo eegin haddii amarkaagu yahay sameeye (wuxuu abuuraa dammaanad is -weydaarsiga) ama qaade (wuxuu yareeyaa xisaabaadka), ama haddii aad isticmaasho meheradda ama aaladaha iibsiga isla markiiba si aad u dalbato dalabkaaga.
Marka lagu daro kharashyadan, oo ku saleysan sida aad u isticmaashid madal, waxaa laga yaabaa inaad ku kacdo dhowr kharash oo dheeraad ah. Wax kasta oo kaarka deynta ah ama kaarka deynta lagu iibsado waxaa ku jiri doona khidmad dhan 5%, taas oo aan ku jirin wax kharash ah oo adiga si gooni ah kuu siinayo bangigaaga ama bixiyaha kaarka deynta.
FTX waa isweydaarsiga isweydaarsiga cryptocurrency oo ay abuureen ganacsatadu si ay u siiso barxad adag ganacsiyada ganacsiga xirfadda leh, ganacsatada dhexdhexaadka ah, iyo kuwa cusub.
On FTX, astaamaha horumarsan, is -dhexgalka isticmaale dareen leh, iyo barnaamijka ganacsiga mobilada ayaa dhammaantood muhiim ah.
FTX waxay shaqaaleysiisaa dhowr habab oo amniga u eg bangiga si loo ilaaliyo macluumaadka shaqsiyeedka dadka iyo lacagaha lagu hayo sarrifka crypto.
Isticmaalayaashu waa inay dhammaystiraan nidaamka diiwaangelinta si ay ugu abuuraan koonto FTX si ay u dejiyaan galitaanka ganacsi ee derisyada. Iyada oo kaliya xaqiijinta emaylka, adeegsadayaashu waxay bilaabi karaan inay ku ganacsadaan isweydaarsiga crypto waxayna la baxaan ilaa $ 2,000 USD maalintii.
Isticmaalayaasha xisaabta Tier 2 iyo 3 ee dhammaystira KYC waxay kala soo bixi karaan tiro aan xad lahayn oo bitcoin ah boorsada qalabka sida Ledger X ama lacag kaash ah koonto bangi iyada oo loo marayo wareejinta siligga.
Ganacsatada madasha FTX waxay xisaabin karaan xisaabaadkooda iyagoo adeegsanaya habab kala duwan oo dhigaal. Cryptocurrency, stablecoins, iyo lacagta fiat ayaa tusaale u ah kuwan.
Simplex, hogaamiyaha suuqa fiat/crypto, wuxuu bixiyaa suurtagalnimada in si toos ah loogu iibsado kaarka deynta iyada oo loo marayo madal FTX. Shirkaddu waxay ahayd tii ugu horreysay ee adeegsata kaarka bangiga ee caadiga ah si ay u furto fiat onramps (tusaale VISA iyo Mastercard).
Haddii kale, ganacsatadu waxay madal ku wareejin karaan shilimaad deggan sida USD, USDC, TUSD, PAX, BUSD, iyo HUSD.
In ka badan 180 qadaadiic waxaa taageera Gate.io. Waxa kale oo ay awood u siineysaa ka -ganacsiga iyo bar -marinta, iyo sidoo kale astaamo kala duwan oo madal ah sida amaahda ama amaahda amaahda, qorshayaasha maalgelinta muddada, maalgelinta IEOs iyada oo loo marayo madal -bilowga, qandaraasyada is -dhaafsiga joogtada ah, iyo wixii la mid ah.
Waxay taageertaa khidmadda ganacsiga 0.20 %, taas oo aad uga hooseysa celceliska adduunka ee 0.25 boqolkiiba. Xirfadlayaashu waxay u arki doonaan mid ka sii muhiimsan, halka kuwa bilowga ah ay ku adkaan doonaan.
KYC looma baahna, in kasta oo ay ku xiran tahay xaddidaadyo kooban. Haddii adeegsadayaashu ay ku bixiyaan ajuurada calaamadaha gate.io, waxay heli doonaan 25% dhimis (GT). Khidmadaha mustaqbalka ee suuqa, oo ah -0.025 % iyo 0.075 %, waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo la adeegsanayo moodalka sameeyaha iyo qaataha.
Markaad lacag gelinayso is -weydaarsiga Gate.io, ma jiraan khidmado macaamil ganacsi. Gabi ahaanba waa bilaash in la isticmaalo.
Bitfinex waa mid ka mid ah is-weydaarsiga ugu caansan oo mashquulsan marka la eego mugga ganacsiga, waana meel caan u ah ganacsatada xirfadleyda ah ee ka kala yimid daafaha dunida.
Waxay bixisaa ganacsiyada fiat-to-crypto iyo crypto-to-crypto labadaba, marka laga reebo dhowr waddan. Ganacsiga xad-dhaafka ah, xaddidaadda iyo joojinta amarrada, iyo meheradaha dukaan-soo-iibsiga (OTC) dhammaantood waa dhinacyo muhiim ah.
Markay timaado dhigaalka, dhigaalka crypto iyo stablecoin gabi ahaanba waa bilaash, si kastaba ha ahaatee, wareejinta siligga bangigu waxay ku kacaysaa boqolkiiba 0.1 xaddiga ugu yar $ 60.
Bitfinex ayaa noqon doonta midda lagu soo dallaco marka ay khuseyso ka bixitaannada. Xawilaadda bangiga/siligga ee yuurooyinka ama doolarka Mareykanka waxay ku kacaysaa boqolkiiba 0.1 xaddiga la gudbiyo, halka wareejinta bangiga cad (oo lagu dhammaystiray 24 saacadood gudahood) ay tahay 1%.
Khidmadda ka noqoshada cryptocurrency way kala duwan tahay iyadoo ku xiran lacagta. Websaytka sarrifka, waxay ku jiraan liis dhammaystiran oo qadaadiic kasta oo ay liis gareeyeen, iyo sidoo kale khidmadaha bixitaankooda; qaar waa xor, laakiin badidoodu ma aha.
Wareejinta gudaha ee hantida dhijitaalka ah, dhanka kale, waa lacag la'aan waxayna la yimaadaan faa'iidooyin dheeri ah marka loo diro koontada isticmaale Bitfinex kale.
Poloniex waxaa laga yaabaa inaysan sidii hore u caan ahayn, laakiin wali waxay bixisaa adeeg aad u fiican marka ay timaaddo ganacsiga kacsan.
Waxay ku faantaa khidmadaha ugu jaban ee warshadaha waxayna kaliya u baahan tahay cinwaanka emaylkaaga si aad isu diiwaangeliso, iyadoo xaqiijinta aqoonsigu gabi ahaanba tahay ikhtiyaar.
Poloniex waxay macaamiisha ku dallacdaa meheraddo goos goos ah, iyo sidoo kale bixitaannada bitcoin, marka ay timaaddo ganacsiga.
Jadwalka ujrada ganacsiga waa sahlan tahay in la fahmo. Qaddarka aad bixiso ganacsi kasta waxaa lagu go'aamiyaa haddii aad tahay qaadle ama sameeye, iyo sidoo kale muggaaga ganacsi ee 30-ka maalmood ah. Isticmaalayaasha Poloniex VIP ee +Qalinka, Dahabka, ama Suuqyada Sameeyayaasha Suuqa ayaa bixiya 0% meheradaha sameeya iyo wax ka yar 0.04 boqolkiiba amarada dhammaystiran.
Poloniex wax lacag ah kama qaado lacag dhigashada bitcoin. Wali waxaad ku adeegsan kartaa meheradahaaga qadaadiic xasilloon oo fiat-ku-dheggan leh inkasta oo aan lacag fiat ah la dhigi karin, laga bixin karin, ama laga iibsan karin madasha.
Macaamiisha waxaa laga qaadi doonaa khidmadaha bixitaanka, kuwaas oo lagu go'aamiyo shabakadda cryptocurrency kasta oo la isweydaarsado.
Isweydaarsiga kale ee cryptocurrency oo runtii si fiican loo yaqaan waa Kraken. In kasta oo kan ugu da’da weyn uusan had iyo jeer ahayn kan ugu fiican, haddana Kraken wuxuu bixiyaa barxad leh ammaan heer sare ah, in ka badan 60 qadaadiic oo uu ka soo xusho, iyo fursad uu “wax ku yeesho” ama ku amaahiyo shilimaadkaaga abaalmarinno, dhammaantoodna ka hooseeya celcelis ahaan kharash.
Ammaanka ugu sarreeya ee Kraken, kharashaadka ganacsi ee ugu yar, iyo tiro badan oo cryptos la heli karo ayaa ka dhigi kara beddel ku habboon maalgashadayaasha cryptocurrency ee cusub iyo kuwa xilliyeedka ah.
Si kastaba ha noqotee, sida Coinbase, ha ku qaadan waqti aad u badan sidii qof cusub si aad halis ugu gasho inaad lumiso qayb weyn oo ka mid ah lacagtaada maalgashiga khidmadaha madal giraangiraha tababarka.
Bittrex waa hormuudka sarrifka ganacsiga cryptocurrency oo ku yaal Seattle, Washington, kaas oo u oggolaanaya macaamiisha inay iibsadaan oo iibiyaan in ka badan 730 suuqyada crypto ee sida joogtada ah looga ganacsado meel aamin ah oo aamin ah.
Nidaamyo amni oo u eg bangiyo badan, sida 2 Xaqiijinta Xaqiiqda (2FA) iyo kaydinta jeebka qabow, ayaa sidoo kale lagu daray si loo sugo ammaanka maaliyadaha macaamilka.
Iibsashada iyo iibinta jagooyinka, Bittrex waxay ku dallacdaa khidmad ganacsi oo go'an oo ah 0.25 boqolkiiba macaamil kasta. Macaamiisha ku nool deegaannada kale waxay bixiyaan kharashaadka ganacsi ee ku saleysan qaab-sameeyaha, kaas oo ka bilowda 0.75 boqolkiiba wuxuuna si tartiib tartiib ah hoos ugu dhacayaa ku tiirsanaanta mugga ganacsiga ee 30-ka maalmood ah.
Dib -u -dhimista khidmadda oo ah 0.05 boqolkiiba ayaa sidoo kale loo heli karaa in lagu biiriyo mugga is -weydaarsiga oo leh mug bille ah oo ka badan USD 25,000.
Bittrex wax lacag ah kama qaado lacag dhigashada lacagaha wareejinta siligga ee xisaabta bangiga Mareykanka ama wareejinta cryptocurrency ee koontada dibedda.
Iibsashada cryptocurrency oo leh kaarka amaahda ama kaarka deynta, dhanka kale, waxay ku dambayn doontaa lacag 3% ah, oo aan lagula talin.
Ma jiraan is -weydaarsiyo badan oo cryptocurrency ah oo leh nooc ka mid ah madal ganacsi oo karti leh oo ay OKex qabato, ku buuxi shaqeynta iyo qaababka ganacsi ee ku jira is -weydaarsiyada maaliyadeed ee waaweyn, ee loogu talagalay maalgashadayaasha khibrada leh.
Dhinac kale oo muhiim ah oo u adeegi doona ganacsatada qibrada leh waa khidmadaha ganacsiga ee hooseeya.
In kasta oo tan la filayo inay is beddesho mustaqbalka dhow, xaqiiqda ah in CNY ay tahay lacagta kaliya ee fiat ee madalku waxay muujineysaa in OKex wali si weyn diiradda u saaran tahay suuqa Shiinaha.
Waa wax macquul ah in la qaato qaab dhismeedka internetka ee OKex si loo waafajiyo heerarka warshadaha iyada oo ah mid ka mid ah is -weydaarsiga cryptocurrency ee adduunka ugu weyn oo leh taageero maaliyadeed oo xooggan.
1. Waa maxay ujeedka XRP -da dooxa?
XRP waa lacagta aasaasiga ah ee alaabooyinka Ripple Labs. Xalkeeda waxaa loo adeegsadaa dejinta lacag -bixinta, is -weydaarsiga hantida, iyo nidaamyada xawaaladaha oo la mid ah SWIFT, adeegga wareejinta lacagta iyo amniga caalamiga ah oo ay bixiso shabakad bangiyo iyo dhexdhexaadiye maaliyadeed.
2. Sanadka 2025, intee ayuu noqon doonaa qiimaha Ripple?
Tani waxay soo jeedinaysaa in hal XRP ay ku kici doonto qiyaastii $ 6 sannadka 2025. Waqtigan, heerka aqbalitaanku wuxuu gaari doonaa heer ay u fududaan doonto adeegsadayaasha inay wax kala iibsadaan oo ka ganacsadaan iyagoo adeegsanaya lacag. Natiijo ahaan, qiimaha ugu sarreeya ee la filayo ee 2025 waa $ 8, laakiin waxay hoos ugu dhici kartaa $ 4.
3. Waa maxay qiimaha hadda ee XRP?
Qiimaha XRP waa $ 1.06.
4. Miyuu Ripple yahay beddel ka fiican Bitcoin?
Ripple, oo ah beddelka lacag -bixinta SWIFT, waxay bixisaa si aad u dhakhso badan, ka jaban, iyo hab aan dhib lahayn oo lagu beddelayo lacagaha oo lacag loogu gudbiyo xuduudaha. Bitcoin ugu horrayn waa lacag taas oo sahayda iyo dalabku ay gacanta ku hayaan cid saddexaad ama maamul dhexe.
5. Maxaa ka dhigaya XRP mid aad u qiimo badan?
Qiimaha XRP waxaa laga soo qaatay dhowr doorsoome, oo ay ugu muhiimsan tahay awoodda Ripple ee la shaqaynta hay'adaha iyo awooddeeda in lagu beddelo lacag kasta ama hanti kasta si degdeg ah oo raqiis ah.
Saamiga abaal-marinta khatarta ayaa muhiim u ah fikirka maalgashiga; si kale haddii loo dhigo, faa'iidooyinka suurtagalka ah ma ka badan yihiin halista luminta lacagtaada?
Ripple waa hanti kulul dhinac kasta, waxaana shaki la'aan noqon doona mid ka mid ah cryptos ugu faa'iidada badan mustaqbalka dhow.
Waxaa lagugula talinayaa inaad maanta ku iibsato Ripple gudaha Mareykanka si aad uga qayb qaadato isbeddelka weyn ee soo socda.
Sida Loo Iibsado Kaydka Ripple 2021 | Hagaha Tallaabo-Tallaabo ah
15 Madal ee Ganacsi Hantida Online ee ugu Fiican Sanadka 2021
Ma rabtaa inaad iibsato Dogecoin? Waxa Aad Ogaato Intaadan Iibsan
Sida Loo Iibsado Kaydka TESLA ee Kanada | 2021 Hagaha Buuxa ee Hantida
Khariidadaha Kaydka ugu Fiican Sanadka 2021
Sida Loo Qoro Jeeg: Buuxi Tallaabooyinkaan
13 Suuqa Flea Online -ka ee 2022 -ka: Wax -soo -saarka Qadiimiga ah iyo Guriga ee Online -ka ah
Alaabo qaali ah oo jaceyl ah oo jiilba jiilba u gudbinayo tayada. Ku iibinta lacag ahaan waa…
10 -ka shey ee ugu qaalisan Adduunka 2022 -ka
Weligaa ma is weydiisay waxa ay dhab ahaantii taajiriintu lacagtooda ku sameeyaan? Iyaga oo aan raali ka ahayn ayay lacagtooda ku bixiyaan…
Iibsashada Guri 2021: Tilmaan Tillaabo Tallaabo ah
Iibsashada guri waa mid ka mid ah go'aamada ugu waaweyn ee aad qaadan doonto. Oo waxay noqon kartaa wax laga xumaado…
10 Siyaabood Oo Lagu Helo Kabaha Tennis -ka Lacag La'aan Ah Sida Nike & Adidas | 2021 Liiska
Ciyaaryahan tennis -ka ah, qiimaha lagu iibsado kabaha sumadda leh sida Nike iyo Adidas had iyo jeer waa…
21 Siyaabood Oo Boostada Loogu Helo Buugaag Bilaash Ah 2022 -ka
Waxa kaliya ee ka fiican buugaagta bilaashka ah waa bixinta bilaashka ah ee buugaagta bilaashka ah! Ma aha oo kaliya…